Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Maraykanka oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Safarka Itoobiya.
Dowlada Maraykanka oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Safarka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ April 28, 2017
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta wadanka Maraykanku aysan usafrin wadanka Gumaysiga Itoobiya, warkan kasoo baxay dowlada Maraykanka ayaa lagu sheegay in wadanka Itoobiya uu kamid yahay wadamada ugu khatarta badan aduunka isla markaana muwaadiniinta USA looga digayo in ay usafraan Itoobiya.
Wadanka Maraykanka oo kamid ah wadamada deeqaha ugubadan siiya xukuumada wayaanaha ayaa sanadihii udambeeyay aad udhimay taageeradii uu uhayay wadanka Itoobiya kadib markay dowlada Maraykanku ogaatay dhibka lagu hayo shacabka Itoobiyaanka ah.
Qoraalkan kasoo baxay wasaarada arimaha dibada ee wadanka ayaa muwaadiniinta Maraykanka ah ee kusugan wadanka Itoobiya loogu baaqay in ay si dag dag ah uga soobaxaan Itoobiya gaar ahaan Gobolka Axmaarada oo ay kusheegeen goob dagaal.
Labadii habeen ee lasoo dhaafay ayaa lasheegayaa in magaalooyinka Bahardar iyo Gonder ee Gobolka Axmaarada ay kadhaceen qaraxyo dhowr ah oo lagu weeraray ciidanka iyo maamulada wayaanaha ee kadhisan magaalooyinkaas.
Qoraalkan digniinta ah ee kasoo baxay dowlada Maraykanka ayaa imaanaya iyadoo ay istaageen dhamaan dalxiisayaashii imaan jiray wadanka Itoobiya iyo maalgashatadii oo meesha kabaxday.
Dhinaca kale sida aan lawada socono waxaa meesha kabaxay inta badan deeqihii taliska wayaanaha lasiin jiray ee dowladaha caalamka ka imaan jiray kuwaas oo sida lasheegayo lajoojiyay kadib markay hay ‘adaha xuquuqul insaanku cambaareeyeen taliska wayaanaha iyo ciidankooda dhaqanka xun.
Ma aha markii ugu horaysay ee dowlada maraykanka iyo dowladaha ree galbeedku ay muwaadiniintooda uga digeen tagitaanka wadanka Itoobiya waxaana kamid ahaa wadamada digniinta bixiyay, Canada, Swedan, Norway, Germany Ingiriiska iyo dowlada Maraykanka oo Markii 4aad digniin soosaartay.